Soo dejisan FileZilla 3.22.1 – Vessoft
Soo dejisan FileZilla
Filezilla – software ah inaad kala soo baxdo iyo files geliyaan ka FTP-server. Muuqaaladan ugu weyn ee software-ka waxaa ka mid ah taageerada ay u la xidhiidha ammaan, maamulaha goobta, dib u download jabay ee file, caching ee haayaha, fogfog raadinta, marka la barbardhigo ee tusaha iwm Filezilla taageertaa FTPS iyo hab maamuuska SFTP in ay si ammaan ah u gudbiyaan files si server kala duwan. Software la shaqeeyaa firewalls badan oo bixiya ilaalinta xogta lagu kala qaado, halka la servers FTP shaqeeya. Filezilla sidoo kale kuu ogolaanayaa inaad u astaysto shabakad iyo xuduud xawaaraha si loo yareeyo cadaadiska ku bandwidth.
Dajinta iyo koombiyuutarka ee files ka FTP-servers
Taageerada beega wareejinta xogta kala duwan
La shaqaynta firewalls kala duwan
Dejinta xiriir shabakadda
Comments on FileZilla:
FileZilla Software la xiriira:
العربية, English, Français, Español... GeoGebra 5.0.282
Horumarinta Agabka in la abuuro rakibayo ee files la taageero ah oo xuduudaheedu kala duwan. Sidoo kale waxa uu qeexayaa oo dhan entries ee files of diiwaanka nidaam iyo initialization.
English, Français, Español, Deutsch... AutoIt 3.3.14.2
Horumarinta qalab ee waxqabadka iswada ee falalka inta badan soo noqnoqda ee nidaamka qalliinka. software The taageertaa hawlaha uu u furo, edit iyo ururiso qabnay ah.
العربية, English, Français, Español... Movavi Video Converter 16.2
العربية, English, Українська, Français... Rhinoceros 5.12.50810.13095
Graphics iyo design Software awood leh in lagula socdo 3D oo ka mid ah mashaariicda ee kakanaanta sare. Software waxaa si balaadhan looga isticmaalaa in design CAD, graphic design iyo qorshaynta warshadaha.
English, Français, Español, Deutsch... CodeLobster PHP Edition 5.10.2
Horumarinta Tafatirka Text editor The in ay tayadoodii iyo fududeeyo habka horumarka PHP. software The kuu ogolaanayaa inaad si edit faylasha iyo ka mid ah qalab loogu talagalay shaqada raaxo leh xeerka.